CP ဆက်သွယ်ရေးသည် Broadcast နှင့် Commercial AV အသင်းများကိုချိန်းချက်နှစ်ခုဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းစေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » နှစ်ဦးချိန်းနှင့်အတူက CP ဆက်သွယ်ရေးအားကောင်းလာစေရန်အသံလွှင့်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး AV စနစ်အသင်းများ
နှစ်ဦးချိန်းနှင့်အတူက CP ဆက်သွယ်ရေးအားကောင်းလာစေရန်အသံလွှင့်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး AV စနစ်အသင်းများ
Sean Sweeney နှင့် Rhett ဗန် Buskirk ကုမ္ပဏီ၏ key ကိုကြီးထွားဒေသများတလွှားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်
Tampa, ဖလော်ရီဒါ, ဧပြီ 29, 2019 - က CP ဆက်သွယ်ရေး, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်ဘဏ်ဍာများအတွက်ဆန်းသစ်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ကျယ်ပြန့်ကြီးထွားမဟာဗျူဟာနှင့်အတူ alignment ကိုအတွက်အသစ်တီထွင်ရာထူးနှစ်ခုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် AV စနစ်စစ်ပြန်ခနျ့အပျခဲ့သညျ။ ထိရောက်သောချက်ချင်း, Rhett ဗန် Buskirk နဲ့ Sean Sweeney အသီးသီး, အထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး AV စနစ်စျေးကွက်များအတွက်အကြီးတန်းအကောင့်အလုပ်အမှုဆောင်အခန်းကဏ္ဍအတွက်က CP ဆက်သွယ်ရေး join ။ ကဲန် Dillard အရောင်းဒုသမ္မတ, မြောက်အမေရိကမှအစီရင်ခံစာနှစ်ဦးစလုံး။
ဗန် Buskirk တိုက်ရိုက်အားကစားပွဲနှင့်အခန်းအနားထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်တစ်ဦးအလွတ်တန်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာနှင့်စနစ်များဗိသုကာပညာရှင်အဖြစ်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုအပါအဝင်ကသူ၏အခန်းကဏ္ဍသစ်မှထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုနီးပါးလေးဆယ်စုနှစ်တတ်၏။ အားကစားများအတွက်တစ်ဦးကငါးအချိန်နည်းပညာဆိုင်ရာသူဟာ Emmy ဆုဆုရှင်သူအမျိုးမျိုးသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာအခန်းကဏ္ဍအတွက်, အိုလံပစ်ပွဲတော်အပေါ် NCAA နောက်ဆုံးလေး, Super Bowl အမေရိကန်ပွင့်လင်း (တင်းနစ်), ကမ္ဘာ့စီးရီးများနှင့်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ NBA နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
က CP ဆက်သွယ်ရေးဝင်ရောက်မတိုင်မီကဗန် Buskirk အခြားအစပျိုးကြားတွင်သူအကြီးစား၏စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ် client များနှင့်အတူညှိနှိုင်းရှိရာ, အကြီးတန်းစနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်အဖြစ် Bexel နှင့်အတူ 15 နှစ်ပေါင်း flypack ထိန်းချုပ်မှုအခန်းပေါင်းနေခဲ့ရသည်။ သူကအများဆုံးမကြာသေးမီကသူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေရေး, E-ဂိမ်းနှင့်အားကစားဖြစ်ရပ်များအတွက် flypack စနစ်များအတွက်အထူးပြုဘယ်မှာ VER များအတွက်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူး, အသံလွှင့်စနစ်များ (အရှေ့) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
က CP ဆက်သွယ်ရေးက၎င်း၏အနီရောင်အိမ်လွှအစုစုကိုအောက်မှာအထောက်အပံ့မှာ-အိမ်မှာထုတ်လုပ်မှုနှင့် streaming များအခွင့်အလမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနေချိန်မှာဗန် Buskirk, က CP ဆက်သွယ်ရေး '' အဓိက RF စျေးကွက်အတွက်အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ က CP ဆက်သွယ်ရေး '' နီအိမ်လွှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအိုင်ပီ, Cloud နဲ့ content ရှာမှီးဖြေရှင်းချက်၏ကုမ္ပဏီရဲ့အသစ်လွှမိသားစုအပါအဝင်ကပ်လျက်တည်ရှိဆယ်လူလာနည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်အာရုံစိုက်။
"ကျနော်တို့ကပိုပြီးဖြစ်ရပ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ streaming များဆီသို့မှထုတ်ပြန်သောရွှေ့အဖြစ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လမ်းဆုံအထိရောက်ရှိခဲ့သည်နှင့်ထို့ထက် ပို. အိုင်ပီနဲ့ cloud-based Workflows ချမှတ်ကြပါပြီ," ဗန် Buskirk ကဆိုသည်။ "ဒါကထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်လျော့ချနဲ့ content မှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများဖွင့်လှစ်သောအချိန်တွင်-အိမ်မှာထုတ်လုပ်မှုမော်ဒယ်၏မြင့်တက်အရှိန်သိရသည်။ ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကလွှမိသားစုသူတို့ထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာကိုအလေးပေးသော, လက်ရှိက CP ဆက်သွယ်ရေး clients များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်အသစ် clients များနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ "
Sean Sweeney ရဲ့ချိန်းဆိုမှုစီးပွားဖြစ် AV စနစ်စျေးကွက်အတွက်က CP ဆက်သွယ်ရေး '' တိုးတက်မှုနှုန်းမဟာဗျူဟာမှနျဆာပဖြစ်ပါတယ်။ Sweeney, ထိုကော်ပိုရိတ်, လက်လီနှင့်ဧညျ့ဒေါင်လိုက်အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကိုရောင်းအား၏ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုဆောင်တတ်၏, နှင့် New York City, မိုင်ယာမီကမ်းခြေဘော်စတွန်, လက်တင်အမေရိက, Puerto Rico, အတွင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ AV စနစ်နှင့်ဖြစ်ရပ်နည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက်ဒါရိုက်တာ-Level ရာထူးကျင်းပခဲ့ပါသည် နှင့် The ကာရစ်ဘီယံ။ AV စနစ်စနစ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတွေ့ဆုံတလွှားနှင့်ဖြစ်ရပ်အာကာသ, ပုဂ္ဂလိကနေရာများ, ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာနှင့်ဟိုတယ် Ballroom စီမံခန့်ခွဲခြင်းအပြင်, သူဟာအမြတ်အစွန်းအရောင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူ၏အတှေ့အကွုံမြားဘရော့ဒ်ဝေး-related ပြပွဲအပါအဝင်ဟိုတယ်ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်မန်နေဂျင်းကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှု, SAG ဆုကိုဖြစ်ရပ်များ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကြယ်များနှင့်အတူ VIP အနုပညာရှင်ဖြစ်ရပ်များပါဝင်သည်။
Sweeney က၎င်း၏အနီရောင်အိမ်လွှဖြေရှင်းချက်များတည်ထောင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ဖလော်ရီဒါဌာနချုပ်မှာတဲ့ professional ထိန်းချုပ်မှုအခန်းတစ်ခန်းအတူက CP ဆက်သွယ်ရေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထုတ်လုပ်မှုဘတ်ဂျက်ထိန်းသိမ်းနေစဉ် ပို. ပို. ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးအကြောင်းအရာလိုအပ်သည် AV စနစ်-related ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုဖမ်းဆီးဖို့ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီးကယုံကြည်သည်။
"က CP ဆက်သွယ်ရေးပြီးသားအလွန် High-end ထုတ်လွှင့်ဈေးကွက်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ရှင်းလင်းစွာကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရိတ်ဖြစ်ရပ်များ toserve နည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းဥပမာ," Sweeney ကဆိုသည်။ "ဒီ AV စနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းညာဘက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအရပ်၌ရှိတစ်ချိန်ကနည်းပညာဆုံးဖြတ်ချက်များမကြာခဏအောက်ပါအတူဗွေဆော်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုတန်ဖိုးထားသည်။ က CP ဆက်သွယ်ရေးပြင်းပြင်းထန်ထန် High-end ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သူတို့ပူဇော်နည်းပညာပလက်ဖောင်းများ၏ထူးခြားသောရောနှောအပေါ်အခြေခံပြီးဒီစျေးကွက်အတွက်အောင်မြင်ဖို့ positioned ဖြစ်ပါတယ်။ "
"Rhett နဲ့ Sean က CP ဆက်သွယ်ရေး၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာနေရာများအတွက်အသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံ၏ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းဆောင်ကြဉ်း" Dillard ကဆိုသည်။ "တစ်ဦးနည်းပညာရှင်အဖြစ် Rhett'sexpertise, အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်အသင်းခေါင်းဆောင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထုံးစံ flypacks ကနေအပြည့်အဝမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုမှအရာအားလုံးကိုလိုအပ်နေတစ်ခုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရင်းအမြစ်ပါစေ။ Sean ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအမြင့်မားသောအရည်အသွေး, ဆန်းသစ်နှင့်ထူးခြားသောနည်းပညာဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကြီးမားတဲ့နှင့်အသေးစား AV စနစ်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကူညီပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကသူတို့ကိုနှစ်ခုစလုံးကြိုဆိုပါတယ်။ "
Rhett နဲ့ Sean အသစ်နှင့်တည်ဆဲဖောက်သည်နှင့်တွေ့ဆုံရန် InfoComm 2019 တက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ Booth 4877 မှာပထမဦးဆုံးအချိန်ပြသခဲ့သည်အဖြစ်, က CP သူတို့ကိုကုမ္ပဏီကိုယ်စားပြုမီဒီယာစျေးကွက်၏အသစ်တစ်ခု segment တစ်ခုသို့သူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံယူလာရှိသည်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ InfoComm Orlando တွင်အဆိုပါ Orange County တွင်ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌အရပျကိုဇွန်လ 12-14 ကြာပါသည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-04-29
ယခင်: Facilis တစ်နှစ်တာဆုကို၏ 2019 NAB Show ကိုကုန်ပစ္စည်းဆွတ်ခူး
နောက်တစ်ခု: Telestream ထဲသို့ Tektronix ဗီဒီယိုပေါင်းစည်းမှု